Baarlamaanka Puntland oo maantay ka dooday dhaqaamaha, siyaasadda, iyo ammaanka Puntland. – Radio Daljir
Juunyo 30, 2012 4:46 b 0
Garowe, June 18 – Baarlamaanka dawladda Puntland ayaa maantay oo sabti ah waxay ka doodeen qodobo ay ka mid tahay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda Puntland. Xilli wali uu socdo fadhigii 28-aad ee golaha wakiillada Puntland.
Dooda baarnaamijka ee maantay ayaa ahayd mid si kulul goluhu u faaqiday arrimahaan, waxaana dood dheer kaddib loo saaray guddiyo gaar ah oo daba-galaya siyaasadda, ammaanka iyo dhaqaalaha.
Fadhiga maantay ee golaha baarlamaanka Puntland ay yeesheen ayaa ah mid kusoo beegmay 3 barri oo goluhu uu fasax-ku jiray, waxaana dib u billaamay kulamadii joogtada ahayd ee goluhu ku daba-galayay hay.adaha dawliga ah, kuna ansixinayay xeerarka ay soo gudbiyaan hay.adaha xukuumadda iyo kuwa gaarka ah eek a tirsan dawladda Puntland.
Jamhuuriyadda Jabbuuti oo maantay u dabaal-dagaysa 35-guuradii kasoo guurtay xorriyada dalkaasi.